Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment कालापानीमा भारतीय फौजको परेड, बालुवाटारमा ‘रअ’ प्रमुखलाई स्वागत - Pnpkhabar.com
काठमाडौं, ७ कात्तिक । राष्ट्रियताको विषयमा नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ताको प्रतीक्षा भइरहेको वेला अचानक गुप्तचर प्रमुखको ‘इन्ट्री’ले देशभक्त नेपालीको मन कु“डिएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग, मन्त्रीले मन्त्रीसँग संवाद गर्नुपर्नेमा भारतको जासुसी संस्थाका प्रमुख सीधै नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीसँग मध्यरातसम्म वार्ता गरेका छन् । यसले कूटनीतिक मर्यादा र देशको स्वाभिमान ध्वस्त बनाएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले कडा विरोध जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलबीचको भेटवार्ताको योजना दुई साता अगाडिबाट भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार दुई साताअघि ‘रअ’का डेपुटी प्रमुख नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेका थिए । उनी पनि प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा नेपाल आएका थिए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘तपाईंको प्रमुखसँग भेट्न चाहन्छु’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले दिल्ली गएर यसबारे थप छलफल गर्ने बताएका थिए । नेपालका प्रधामन्त्रीले नै भेट्न चाहेका छन् भनेपछि ‘रअ’ प्रमुख वायुसेनाको जहाज चढेर दलबलसहित काठमाडौं आएका हुन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले परराष्ट्र नीति, स्वाधीनता, स्वाभिमानको विपरीत प्रधाममन्त्री ओलीले ‘रअ’ प्रमुखसँग भेटेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका सन्दर्भमा मतभेद भइरहेको र भारतसँग सचिवस्तरमा वा मन्त्रीस्तरमा वार्ता गरौँ, आफ्ना मत राखौँ भनिरहेको र भारतले त्यसलाई स्वीकार नगरिरहेको अवस्थामा कायमै छ ।
यहीवेला भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुखलाई जुन शैली, समयमा नेपाल ल्याइयो, बोलाइयो र प्रधानमन्त्रीले राति लामो वार्ता गर्नुभयो,’ नेता रावलले भने, ‘यो भेट हामीले संविधान निर्माण गर्दा नेपालको संविधानमा अंकित गरेको परराष्ट्र नीति, स्वाधीनता, स्वाभिमानको विपरीत छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाको नीति, विचार, मान्यताको विपरीत छ । कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ ।’
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य राम कार्कीले अहिले प्रधानमन्त्रीले भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखलाई भेटेर एउटा अवसर गुमाएको बताए । ‘अहिले भूमि मिचेको र नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साले पनि एउटा राष्ट्रवादको बहस चलिरहेको छ । यो वेलामा प्रधानमन्त्रीले नै नभेटिदिएको भए राम्रो सन्देश जान्थ्यो । अब नेपाल पुरानो नेपाल रहेन, नेपालले पनि सन्तुलित विदेश नीति अपनाएको छ भन्ने सन्देश जाने थियो ।
तर, यो भेटघाटले दक्षिणी छिमेकीको परम्परागत प्रभाव बाँकी नै छ भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, अहिले हाम्रा लागि सन्तुलनको विदेश नीति अख्तियार गर्ने असाध्यै अनुकूल समय हो । खासगरी हिजो उत्तरी छिमेकी चीनको अवस्था कमजोर हुँदा हामी स्वाभाविक रूपमा दक्षिणतिर नजिकिन बाध्य भयौँ । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । भारत र चीन दुवै विश्व–राजनीतिमा आफ्नो हिस्सा खोजिरहेका राष्ट्र हुन् । त्यसैले अहिले दुवै छिमेकी बलियो भएको अवस्थामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अनुकूल समय छ । तर, यो भेटले त्यस्तो देखाउँदैन ।’
त्यसैगरी सोही समितिका अर्का सदस्य नारायण खड्काले भेटले प्रधानमन्त्रीमाथि नै शंका उत्पन्न गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘दुई देशबीचमा खासै उपलब्धिमूलक वार्ता भइरहेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा अगस्ट १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दिँदा टेलिफोनमा सामान्य कुराकानी भए पनि त्यसले औपचारिक वार्ताको ढोका खोलिरहेको थिएन ।
अहिले अचानक भारतीय गुप्तचर प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई करिब तीन घन्टा भेटेको भन्ने आएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार आएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको एउटा प्रतिनिधि भएर आएको भन्ने हुन्थ्यो । तर, ‘रअ’ प्रमुख आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्ने सुन्दाचाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल, स्तर, मर्यादा, कूटनीतिक हिसाबले पनि अनुकूल होइन । यसले प्रधानमन्त्रीमाथि नै शंका उत्पन्न गरेको छ,’ उनले भने ।
प्रचण्डका सचिवालयका तर्फबाट प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘संवेदनशील विषयमा झुट, कपोलकल्पित र भ्रामक समाचारप्रति खेद प्रकट गर्दै आमजनसमुदाय तथा सञ्चार जगत्लाई भ्रममा नपर्न अपिल गर्दछु ।’ त्यस्तै, वरिष्ठ नेता नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले पनि विज्ञप्तिमार्फत भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेका छन् ।
‘पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र ‘रअ’का प्रमुखबीच भेट भएको भनी कतिपय सञ्चारमाध्यममा झुट, कपोलकल्पित र भ्रामक समाचार प्रकाशित भएकोमा त्यसको खण्डन गर्दै यसप्रकारका समाचारबाट भ्रममा नपर्न सम्बन्धित सबैमा सादर अनुरोध छ,’ गौतमको विज्ञप्तिमा छ ।
नेपाल र भारतबीच लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका सन्दर्भमा मतभेद भइरहेको र भारतसँग सचिवस्तरमा वा मन्त्रीस्तरमा वार्ता गरौँ, आफ्ना मत राखौँ भनिरहेको र भारतले त्यसलाई स्वीकार नगरिरहेको अवस्थामा कायमै छ । यही वेला भारतीय गुप्तचर संस्था रअ प्रमुखलाई जुन शैली, समयमा नेपाल ल्याइयो, बोलाइयो र प्रधानमन्त्रीले राति लामो वार्ता गर्नुभयो । यो हामीले संविधान निर्माण गर्दा नेपालको संविधानमा अंकित गरेको परराष्ट्र नीति, स्वाधीनता, स्वाभिमानको विपरीत छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाको नीति, विचार, मान्यताको विपरीत छ ।
कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ । विगतमा विभिन्न बाह्य गुप्तचर संस्थाले हाम्रो देशमा चलखेल गरे, हामीले धेरै दुःख पायौँ । संविधान निर्माण गर्दा पनि हाम्रो देशमा नाकाबन्दी लगाएको थियो । नेताहरूको घरघर गएर भारतीय सरकारका मानिसले दबाब दिएका थिए । यी सबै चटक्कै बिर्सेर अहिले फेरि त्यसको पुनरावृत्ति गर्ने किसिमको व्यवहार हुनु अन्यन्तै दुःखलाग्दो हो । र, यसलाई राजनीतिक दलहरूले, तिनका नेताहरू, संसद्, बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मी सबैले अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
तेस्रो देशले उक्साएर नक्सा जारी गर्यो भन्ने भारतीय सेनाका प्रमुखलाई नेपाल बोलाएर मानार्थ महारथीको सम्मान गर्ने तयारी हुँदै गर्दा ठीक त्यसको अगाडि गुप्तचर संस्थाका प्रमुखलाई बोलाएर देशको कार्यकारी प्रमुखले राज्यका सञ्चालनका परिपाटी, कूटनीतिक मर्यादा, स्वाभिमान, कुनै पनि कुराको मतलब नराखेर राति लामो भेटघाट गर्ने अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो । भेटले दक्षिणी छिमेकीको परम्परागत प्रभाव बाँकी नै छ भन्ने पुष्टि गरिदियो : राम कार्की, सदस्य, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशको कर्मचारीसँग भेट गरेको कुरा सुन्दा पनि अस्वाभाविक नै लाग्छ । तर, हामीकहाँ जसको शक्ति उसैको भक्ति गर्ने चलन पनि छ, जस्तै कि अमेरिकाको विदेश सहायकमन्त्री आउँदा राष्ट्रपति नै अघि सर्ने । तथापि, कर्मचारीलाई कर्मचारीस्तरकै स्वागत र भेटघाट राम्रो हो । फेरि अहिले भूमि मिचेको र नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साले पनि एउटा राष्ट्रवादको बहस चलिरहेको छ ।
यो वेलामा प्रधानमन्त्रीले नै नभेटिदिएको भए राम्रो सन्देश जान्थ्यो । अब नेपाल पुरानो नेपाल रहेन, नेपालले पनि सन्तुलित विदेश नीति अपनाएको छ भन्ने सन्देश जाने थियो । तर, यो भेटघाटले दक्षिणी छिमेकीको परम्परागत प्रभाव बाँकी नै छ भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ । अर्को कुरा, अहिले हाम्रा लागि सन्तुलनको विदेश नीति अख्तियार गर्ने असाध्यै अनुकूल समय हो । खासगरी हिजो उत्तरी छिमेकी चीनको अवस्था कमजोर हुँदा हामी स्वाभाविक रूपमा दक्षिणतिर नजिकिन बाध्य भयौँ ।
तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । भारत र चीन दुवै विश्व राजनीतिमा आफ्नो हिस्सा खोजिरहेका राष्ट्र हुन् । त्यसैले अहिले दुवै छिमेकी बलियो भएको अवस्थामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अनुकूल छ । तर, यो भेटले त्यस्तो देखाउँदैन । भेटले प्रधानमन्त्रीमाथि नै शंका उत्पन्न गरेको छ : डा. नारायण खड्का, सदस्य, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति
कताकता आफ्नो समकक्षी जसरी भेटघाट हुने भनेकोचाहिँ ‘डिप्लोमेटिक’ हुँदैन । हाम्रो अनुसन्धानको चिफलाई प्रधानमन्त्री मोदीजी भेट्नुहुन्छ ? पक्कै भेट्नुहुन्न । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि बरु उनकै समकक्षीसँग भेट गराइदिएको भए हुन्थ्यो , आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।